‘ यी दम्पत्तिलाई ग्रान्डीले नराम्ररी ठग्यो, ९० दिन अस्पताल बसेर उपचार गरियो टाउकोको साइज बढेको बढ्यै छ, १३ महिनाको बच्चाले हलचल गर्दैन, - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
‘ यी दम्पत्तिलाई ग्रान्डीले नराम्ररी ठग्यो, ९० दिन अस्पताल बसेर उपचार गरियो टाउकोको साइज बढेको बढ्यै छ, १३ महिनाको बच्चाले हलचल गर्दैन,
प्रकाशित : आइतबार, असार २९, २०७६०९:३२ पब्लिक आवाज /संवाददाता
काठमाडौँ । सन्तान जन्माउने योजनामा रहेका सञ्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरेलाई निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीको लापरबाहीले आफूहरूमा कल्पनै गर्न नसकिने पीडा आइलागेको उहाँहरूको भनाइ छ।
झन्डै १३ महिनाअगाडि अर्थात् सन् २०१८ जुन २६ को कुरा हो। ३६ हप्तामा सञ्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरेको पहिलो सन्तान जन्मियो। बच्चा ४० हप्तामा परिपक्व हुने भए पनि आमालाई थाइराइड र कलेजोमा बोसो जम्ने (फ्याट्टी लिभर) भएकाले डाक्टरले सिजरिङ गर्ने सल्लाह दिए। बच्चाका आमाबुबाले स्वीकृति दिए। बच्चा अपरिपक्व अवस्थामा नै जन्मेकाले श्वास फेर्न गाह्रो भएकाले नियोनेटल इन्टेन्सिभ केयर युनिट (एनआईसीयू)मा राखियो।
पीडित सञ्जीवलाई डाक्टरहरूले अझै झुक्याए, यथार्थ बताएनन्। बच्चाका टाउकोमा पानी जमेकाले तत्काल ढाडबाट पानी निकालेर परीक्षण गर्नुपर्छ भने। तर पानी निकाल्ने क्रममा पिप निस्कियो। बच्चालाई बढी डोजको एन्टिवायोटिक चलाएर वार्डमा सारियो। ४०औं दिनमा एनआईसीयू टिमले बच्चाको दिमागमा पिप जमेकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्यो। न्युरो सर्जन टिमले बच्चाको एमआरआई गराई शल्यक्रियाको विकल्प नभएको बतायो।
सञ्जीव अत्यन्तै मार्मिक कुरा गर्दै भन्नुहुन्छ– ‘बच्चालाई शुरूमै भेन्टिलेटरमा राख्दा ब्याक्टेरियाले संक्रमण गरेको रहेछ। १३ महिनाको बच्चा क्यान्सरभन्दा जटिल समस्यासँग लडिरहेको छ। बच्चाका लागि हामी दम्पती पल–पल मरेर बाँचेका छौं। कतिपटक बच्चा निदाउँदा पनि हाम्रो मुटुले काम नै गर्न नसक्ला जस्तो हुन्छ। पालैपालो आफूलाई सम्हालेर बच्चालाई छाम्छौं, बेडमै नदेखिने भइसक्यो। कुनै सक्रियता छैन, टाउकोको साइज बढेको बढ्यै छ।
टाउकोभित्र पानी जमेको छ। अस्पतालको लापरबाहीले हाम्रो परिवारमा ठूलो क्षति पुग्यो।’ सञ्जीव दम्पतीको पीडाको यो कथा अझै सकिँदैन। उहाँहरूका अनुसार बच्चालाई ९० दिन अस्पताल राखेर डिस्चार्ज गरियो। डिस्चार्जपछि पनि अस्पताल धाउने क्रम टुटाइएनन्। न्युरो सर्जनहरूले भिडियो एक्सरे र सिटी स्क्यान गराउँदा टाउकोको दायाँ भागमा राम्रो र देब्रेतर्फ कम तर सुधार हुँदै गएको बताएका थिए।
सञ्जीव न्यौपानेले आफ्नो उजुरी निवेदनमा लेख्नुभएको छ–बच्चा जन्मिएको ८ महिनाको फलोअपमा बच्चालाई हस्पिटलमा लैजाँदा अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्टले बच्चाको टाउकोमा पानी जमेको छ भन्यो, सो रिपोर्टबाट ८ दशमलव ८ सिएम पानी जमेको छ भनी अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्टले देखायो, तर डाक्टरले ठाडै यो ८ दशमलव ८ सिएम हुन सक्दैन भनी प्रेस्क्रिप्सनमा ८ दशमलव ८ एमएम भनी सदाझैं महिनै पिच्छे पुनः चेकअपका लागि ल्याउन भनियो ।
सोही निवेदनमा उहाँले थप लेख्नुभएको छ –‘भने अनुसार हस्पिटल लैजाँदा डा. अमित थापासहितको टोलीले बच्चाको टाउकोको एमआरआई गर्न लगायो । एमआरआई रिपोर्टअनुसार बच्चाको टाउकोमा ९ दशमलव ८ सिएम पानी जमेको छ भनी अप्रेशन गर्नुपर्दछ भनेबाट बच्चाको टाउको ब्रेनको पाँचौ अपरेशन गरियो, त्यतिबेला बच्चा ९ महिना पूरा भएको थियो ।
दैवको खेला उल्टै न्यौपाने दम्पत्ति नै अस्वस्थ हुनुभयो। बच्चाको ज्वरो झन् बढ्यो। अहिले बच्चालाई घरमै राख्नुभएको छ। मेडिकल काउन्सिलमा पनि छानविनका लागि निवेदन दिनुभएको छ उहाँहरूले।
सञ्जीवले पीडाका दिन सम्झदैँ भन्नुभयो– ‘हामीलाई त ग्रान्डीले नराम्ररी ठग्यो, अब अरू कोही नठगिउन। मेडिकल काउन्सिलले सत्य तथ्य छानविन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराओस्। समाचार स्रोतका अनुसार ग्रान्डी अस्पतालबाहिर हल्ला भएजस्तो अस्पताल होइन रहेछ।
सञ्जीवले भन्नुभयो– ‘शुरुमा अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले रातको १० बजे बेडमै आएर एकदम ब्लण्डर नै भयो भन्नुभयो। मेरो श्रीमतीलाई मेरो
छोरीजस्तै रहिछौ, बच्चा मेरो नातीजस्तै हो म जसरी पनि बचाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भेट नै दिनुभएन। कानूनी बाटो खोज भन्नुभयो।
अस्पतालले धोका दिएकै हो। विदेशमा भए यत्रो ठूलो मिस्टेक गर्ने डाक्टरको लाइसेन्स नै खारेज गरिन्थ्यो। नेपालका निजी अस्पतालले त उल्टै इनाम दिएर राख्दारहेछन्। ग्रान्डीले धोका दिएको हो। १३ महिनाको बच्चा खाने खेल्ने बेलामा सेन्स हराइसक्यो।
तर मलाई बच्चाको दिमाग बनेको छैन, उपचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर ग्रान्डीले एकपटक पनि भनेन।’ अस्पतालले ग्रान्डीकै बुलेटिनमा प्रत्येक महिना बच्चाको असम्भव
यसबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेलको नेतृत्वमा कमिटी बनेर छानविन सुरु भएको उक्त काउन्सिलका अर्का सदस्य डा. प्रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।यो समाचार नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा भगवती तिमल्सिनाले लेखेका हुन्।
पत्रको विस्तृत अंश
मुलुकमा पहिलो पटक बन्यो पिपिईलगायत मास्क परीक्षण गर्ने यन्त्र